Hlangana noVivaldi, isiphequluli esisebenza kahle kuhlobo lwaso lokuqala | Kusuka kuLinux
Hlangana noVivaldi, isiphequluli esisebenza kahle kuhlelo lwaso lokuqala
pedrini210 | | Aplicaciones, Izaziso
Phakathi kwezinye izindlela ezikhona emhlabeni wekhompyutha, maqondana nokuphequlula iwebhu, sithola izinketho eziningi zalo msebenzi. Vele, kuhlala kukhona abaholi kule ndawo futhi ngenxa yalesi sizathu bangokhetho lokuqala phakathi kwabasebenzisi. Kuleli kheli futhi kwaziwa kahle phakathi kweziphequluli zewebhu esinazo Opera, ebhekiswe futhi eqondiswe ekugcineni idatha. Kepha kulokhu ngeke sikhulume ngakho, kodwa ngesinye isiphequluli, esenziwe ngomunye wabasunguli be-Opera, futhi manje esethulwe kuhlobo lwayo lokuqala olusemthethweni. Sikhuluma ngakho Vivaldi.
UVivaldi wazalwa ngemuva kwezindlela ze-Opera, ngokombono wabasunguli bayo, ezahlanekezelwa kancane kancane. Umqondo oyisisekelo wokudalwa kwawo bekuwukwenza isiphequluli esilawula izinsiza ezimbalwa, sisheshe, futhi sihlanganise zonke izidingo ezithile zabasebenzisi. Ngemuva kokuthuthukiswa kwe-Opera kanye nokuhamba kwesikhathi, kanye nokufakwa kwabahlanganyeli abasha kuphrojekthi, imibono eminingi yokuqala yahamba yaya kolunye uhlangothi kunaleyo eyasungulwa ekuqaleni ngabasunguli bayo. Ngakho-ke, isiphetho salokhu bekuwukwakha isiphequluli esisha. Enye eyayine-orientation ababeyifuna ngokusho komunye wabasunguli bayo "Isiphequluli ebesicebile ngokusebenza, siguquguquka kalula futhi sinabasebenzisi njengenhloso eyinhloko". Wazalwa kanjalo uVivaldi.
Ngemuva kwezinyanga ezingaphezu kweziyishumi nambili zokusebenza, lesi siphequluli siqala njenge- I-Vivaldi 1.0. Ukuletha izinketho zokwenza ngokwezifiso nezici ezizothuthukisa isipiliyoni somsebenzisi ekukhiqizeni uhlelo nasekusebenzeni kahle. Ngokuningiliziwe sithola izixazululo, njengestaki samathebhu; ukuxazulula inkinga yemfuhlumfuhlu futhi wenze ukushintsha kusuka kuthebhu eyodwa kuya kwenye kube lula. Sithole nenqwaba yamawindi; ukubuka amathebhu amaningi emakhasini ahlukene ngasikhathi sinye. Okusho ukuthi, izitaki eziningi zamathebhu esikrinini sakho.
Ukuphathwa kwesiphequluli kuzothuthuka kakhulu ngenxa yeseshini; gcina esimisweni sakho umsebenzi owenzayo bese uqala kabusha kuseshini elandelayo yokutakula. Ngokwesinye isandla ungagcina amanothi akho lapho uwadinga; Maka okufunayo nokudingayo noma ube nezithombe-skrini, futhi uma ufisa, ungabuyela kusayithi obukade uphequlula kulo ngenkathi ubhala lelo nothi, ngoba isiphequluli siligcina libhalisiwe.
Uzokwazi ukufinyelela kumathebhu avulekile, amabhukumaka, umlando, izilungiselelo nokuningi nge- isikhombimsebenzisi somyalo osheshayo. Thola izinqamuleli zekhibhodi ne-Speed ​​Dial kusuka kunoma iyiphi ithebhu engenalutho. Hlela amafolda namaqembu ngokudayela okusheshayo, ukufinyelela amabhukumaka kusuka kuphaneli yalokhu nokukwazi ukuwaphatha. Ungabona amawebhusayithi kubha eseceleni yeVivaldi, into abathuthukisi bayo abayichaza ngokufana nokuthi "inkinobho ye-Boss" yewebhu.
Okwenza iVivaldi ivumelane nezimo ngamathuluzi wokwenza ngokwezifiso equkethe. Isiphequluli siba ngokwezifiso ngokwengeziwe ukuze umsebenzisi akwazi ukusilungisa ekusebenziseni nasezidingweni zawo ezihlukile, futhi asenze sisebenze kahle futhi siphumelele.
Zenziwe lula izici zeVivaldi esinazo ngaleso sikhathi:
Ukuzulazula okusheshayo; ngokufinyelela ezinqamulelweni, ukuhlehliswa kwekhasi noma ukweqa kwelinye ikhasi ngokuthuthuka okusheshayo nokusheshayo, nokufinyelela okusheshayo okuhlelwe kumafolda, izinto ezizokwenza isipiliyoni sibe lula.
Ukuzulazula okuhlakaniphile; esukela ngokwezifiso izinjini, inothi ukuthatha ngenkathi upheqa. Iphaneli eseceleni lokulandwayo, amanothi, namabhukhimakhi. Ukungeza iphaneli lewebhu elizokusiza ukuthi uzulazule ngokufana noma ukufinyelela isiza osifunayo.
Umphathi wethebhu; ungafaka amathebhu eyodwa ngaphezulu kwenye bese uwagcina. Ungagcina futhi amathebhu amaningi avulekile bese uqala kabusha iseshini yakho ngezinye izikhathi. Ukushintsha kusuka kuthebhu eyodwa kuya kwenye kuyashesha, ungenza futhi ukukhuliswa kwebha yethebhu ukuze uzibuke kuqala. Ungabuyisa futhi lezo ezivaliwe noma ezikhiyiwe futhi ungazibeka ngokufana noma kugridi.
Izici ezibukwayo; uzokwazi ukuqonda ukuthi i-interface interface ivumelana kanjani nekhasi lewebhu olivakashelayo. Ungashintsha futhi i-interface uma ufisa, futhi wenze ngezifiso isithombe sangemuva sezinqamuleli bese ulungisa izingxenye zesixhumi esibonakalayo. Ekugcineni, kunenketho yokwandisa okuqukethwe kwekhasi kusuka phezulu kuye phansi.
Omaka; uzoba nebha yamathuluzi eseduze ukwenza lula ukuphatha nokufinyelela kwamabhukhimakhi. Ngaphezu kokukwazi ukwabela amagama kumabhukhimakhi ukuze uwathole ngokushesha kubha yekheli.
Izinqamuleli; Sebenzisa izinqamuleli zekhibhodi ukwenza izenzo ohlelweni ngokusebenzisa inhlanganisela yokhiye bese wenza imisebenzi yakho kusiphequluli negundane.
Njengoba iVivaldi iyisiphequluli esisha sewebhu, abasebenzisi abaningi bazozibuza ukuthi silunge kangakanani noma uma kufanelekile ukusisebenzisa, esikhundleni seziphequluli ezidume kakhulu. Akuyona imfihlo ukuthi iFirefox neChannel zihola le makethe, ngakho-ke mhlawumbe kunzima kakhulu ukuba enye yezinketho zokuqala. Kepha uma sifunda ngemvelaphi yabasunguli bayo, IVivaldi yakhelwe ukwenziwa ngokwezifiso, ukwenziwa lula nokushesha. Okukwenza kukufanele ukuhlola ukuthi kuvumelana nezimo kanjani ekusetshenzisweni kwethu.
Yize uVivaldi evelele ngezindlela eziningi nge-Chrome, esimweni se-MS EdgeLokhu kushesha ngokungangabazeki kune-Chrome kusistimu ye-kernel ekabili, okwenza kusetshenziswe kahle ama-cores amaningi. Okusenza sikuqonde ukuthi kuleli cala kungashesha kunoVivaldi. Kepha siyaphinda sigcizelela ukuthi umehluko phakathi kwalaba ababili noVivaldi wukuxhaphaza izici eziningi zohlelo, ezingatholakali kwezinye iziphequluli futhi ezichazwe ngokuqinile kulokhu, ngoba izinketho zokwenza ngokwezifiso zincane futhi aziguquki kalula.
Ngokuphathelene nezinto zeVivaldi, siyazi ukuthi isikhombimsebenzisi sayo siphatha uJi-avaScript ne-React, njengeNode.js. Futhi ukuthi i-kernel yakho isebenza ne-Chromium. Ngaphezu kwalokho, iVivaldi iyahambisana neLinux, Mac neWindows, ukusebenza kwi-distro esetshenziswa kakhulu.
Ukwazi izici zeVivaldi, kusala kuphela ukuthola iziphetho zakho kusiphequluli lapho usivivinya. Ukuze wenze lokhu, finyelela lesi sixhumanisi bese ubheka inketho yokulanda ekhasini layo elisemthethweni: https://vivaldi.com/download/
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Hlangana noVivaldi, isiphequluli esisebenza kahle kuhlelo lwaso lokuqala
Amazwana ayi-12, shiya okwakho
U-ALEJANDRO MEJIA MATIZ kusho
Bengilokhu ngiyisebenzisa futhi yinhle kakhulu kepha ngithole isiphazamiso esicasula kakhulu futhi kulapho-ke lapho ngishiya khona iGoogle njengenjini yokusesha ezenzakalelayo bese ngisesha ngqo kubha yamakheli noma esikhaleni sayo kwesokudla Iyabuya yimina ikhasi lasekhaya lakwaGoogle ngaphandle kwempendulo ngakho-ke kufanele ngiseshe ngqo lapho. Akufani nabanye abanjengoBing.
Sengivele ngiyibikile, ngiyethemba bayayixazulula ngokushesha ngoba isusa isifiso sokuqhubeka nokuyisebenzisa
Phendula ku-ALEJANDRO MEJIA MATIZ
Sawubona Unjani kusho
«Ngqo lapho» noma «ngqo lapho» ... ngiyacela, uma sizokhipha umbono, okungenani ake sibhale kahle
Phendula u-ola q ase
Nginawe, sawubona, uma sizonikeza umbono, okungenani ake "siyibhale" kahle, esikhundleni sokuthi "asiyibhale" kahle.
Ngokuqondene nesiphequluli, osukwini lwaso ngisizamile futhi sashiya ukunambitheka okuhle emlonyeni wami, nokuthi sasiyinguqulo ye-beta uma ngikhumbula kahle.
UJavier Villanueva kusho
Kukhona isibuyekezo esihambelana no-Ephreli 26, mhlawumbe isiphazamisi osibikayo singalungiswa.
Phendula uJavier Villanueva
Kugeleze kahle kuXubuntu 14.04 x64 futhi kusebenza kahle kuFedora 23 x64… Ngincoma lesi siphequluli seWebhu esikhulu sivale amehlo
Isiphequluli esihle kakhulu, kuze kube manje ukuthi ngiyasisebenzisa. Iyashesha, iyamanzi, ine-interface enhle, ngizoqhubeka nokuyihlola futhi uma konke kuhamba kahle, ngicabanga ukuthi ngizohlala nayo isikhashana. Siyabonga ngokufaka.
Yebo, ukuyilanda bese uyizama isonto lonke. Okuthunyelwe okuhle.
Uhlobo lwelayisense luyi-freeware, akunjalo? Ngamanye amagama, yisoftware ephathelene.
Angifuni ukuba ngabantu ababi, kepha umqondo awukona ukuthumela isoftware yamahhala noma umthombo ovulekile kusici sayo?
I-athikili enhle. Jabulela
Ngiyisebenzise amahora ambalwa futhi ngagcina ngokubuyela emuva, njengenjwayelo, kuFirefox. Angazi noma kuzoba ngcono yini noma kube kubi kakhulu, kepha sengikujwayele kakhulu ... Kumele ukuthi sengiyaguga. Enye into, uma okushiwo uFran kuyiqiniso, usengakwazi ukwenza i-chiribitas….
U-Edgar Ilasaca Aquima kusho
Nginesidingo sokonga kudatha yokuzulazula ngoba ngihamba kakhulu ngomsebenzi futhi ngisebenzisa imodemu ye-USB ukuxhuma. Ngingathanda ukwazi ukuthi ngabe i-Opera iyindlela engcono kakhulu yokufeza lokhu noma ngabe kukhona izinketho ezisebenza kahle kakhulu.
Ukubingelela kusuka ePeru
Phendula u-Edgar Ilasaca Aquima
UKevin Rodriguez kusho
Kade ngiyivivinya e-Archlinux futhi ingifanela kahle, iqiniso ukuthi bengingasazi lesi siphequluli.
Phendula uKevin Rodríguez
Ngikuhlolile ku-ArchLinux kepha yize umsindo usebenza kahle, okufanayo akwenzeki ngevidiyo, ku-YouTube ngokwesibonelo, futhi uma ngifuna ukufaka ama-vivaldi-ffmpeg-codecs kusuka ku-AUR izama ukulanda i-506 Mb (kufaka phakathi iChromium ). Yini engiyenzayo engalungile?
Amaklayenti wamahhala nemitapo yolwazi ye-WhatsApp evulekile kakhulu
Thola amaphakheji nge-apt-cache kanye aptitude